केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ५ गल्ति
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७५, शुक्रबार ०३:३० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । यौन जीवन अर्थात् सेक्स । कसैले मन पराए पनि या नपराएपनि यो जीवनको एउटा वास्तविकता हो । एउटा सत्य चाहिँ के हो भने सेक्स जीवन या मानिसको यौन जीवनले उसको जीवनका अन्य पक्षहरु सोझोरुपमा प्रभावित गरेको हुन्छ ।
नेपाली समाज, महिलाहरु त्यसैपनि खुल्न सक्दैनन । मन भएपनि चाहना भएपनि उनीहरु खुलेर यौनक्रियामा सहभागी हुन सक्दैनन । मन उनीहरुलाई पनि हुन्छ तर कमै मात्र महिला वाइल्ड बन्न सक्छन । अनि यसो हुँदा पुरुषलाई नीला चलचित्रकाे सम्झना आउँछ ।
ओहो, यसरी कम्मर हल्लाउनुपर्ने, यसरी चाक उफार्नु पर्ने । उसले त्यो पाउँदैन । अनि सोच्छ, मेरो पार्टनर त लेजी, इनएक्टीभ । तर यो सत्य हुँदैन । महिलाले व्यक्त गरेपनि या नगरेपनि उसले यौन आनन्दको मजा लिइरहेकी हुन्छे । समस्या के हो भने नीलो चलचित्र जस्तो ऊ खुल्न भने सक्दिन । यो अवस्थामा केटा मान्छेले केही गल्ती गर्ने गर्छन । त्यो यौनजीवनलाई निरश बनाउन पुग्छ ।
१. तुलना गर्नु
केटा मान्छेले सेक्स गर्दा चलचित्रको दृश्य या आफूले सम्झेको कुनै महिलालाई यौनसँग जोड्छन । यो नितान्त गलत हो । कतिपय केटाहरुले पार्टनरसँग सेक्स गरेका हुन्छन् तर सम्झिन्छन् अरुलाई । ऊ मेरो मुनि छ, उसको ‍‍‍‍… यस्तो, उसको .. यस्तो, उ अहिले भएको भए यसरी सेक्स हुन्थ्यो आदि इत्यादी । तर यो सोच्नु घातक हुन्छ । सेक्स गर्ने बेला आफ्नो पार्टनरमा मात्रै सीमित हुनुस् ।उसलाई मात्रै दिमागमा राख्नुस् । यसले धेरै फरक पार्छ । अपनाएर हेर्नुस् ।
२. इच्छा नबझ्नु
महिलाहरुको यौन मनोविज्ञान जटिल हुन्छ । उनीहरु एकैछिन् पुरै सेक्स गर्न चाहने हुन्छन्, एकैछिनमा प्यासिभ हुन सक्छन् । त्यसैले उनको मुड अनुसार आफूले व्यवहार गर्नु जरुरी हुन्छ । जस्तो सेक्सको बेला पार्टनरलाई यौनाङ्ग नचलाए हुन्थ्यो लाग्न सक्छ । या दूधमा किस नगरे हुन्थ्यो लाग्न सक्छ या या दूध बेस्सरी माडे हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । यो इच्छा बुझ्न् जरुरी हुन्छ । इच्छा बुझेर सोही अनुरुप व्यवहार गर्न सकियो भने महिला पूर्णरुपमा समर्पित हुन सक्छन् । यो कुरा विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
३. मजा आयो कि नाई सोध्नु
केटा मान्छे र केटी मान्छेको मनोविज्ञान पु्रै फरक हुन्छ । केटा मान्छेको अर्डरमा समाज चलेको छ । त्यसैले उनीहरुका लागि केटी मान्छे सन्तुष्टिको साधन हुन् । सेक्स गर्दा केटाहरुले मजा आयो हैन ? कि किस गरम या कि तल नै चाटम भन्ने गर्छन्। यो गल्ती कहिले नगर्नुस् । यौन क्रिडामा केटाहरु बोलेको केटीहरु मन पराउँदैनन् । तपाई आफ्नो एक्सनमा र उनको इच्छामा मात्र ध्यान दिनुस् ।
४. हतारो, सारै हतारो
केटा मान्छेले गर्ने अर्को गल्ती हतारो हो । केटी भेट्यो कि किस गरिहाल्ने ? चलाउनै पर्ने । जबकि महिलाहरु भने यसको ठीक उल्टो हुन्छन् । उनीहरुलाई हतारो मन पर्दैन । केटीहरु सुस्तरी तात्ने गर्छन् । त्यसैले यौन सम्बन्ध हुने अवस्थामा आफूलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । हरेक क्रिया सुस्तरी धैर्य राख्नुपर्छ । किस गर्ने, सुम्सुम्याउने आदि कुरामा धैर्यता राख्नुपर्छ । स्टेप बाइ स्टेप केटी मान्छेलाई क्लाइमेक्समा पुर्याउनुपर्छ ।
सेक्सपछि केटा मान्छेलाई कुरा गर्न मनपर्छ । जबकि पूर्ण सन्तुष्ट भएको अवस्थामा केटी भने सुत्न चाहन्छ । तर केटा मान्छेले सेक्सपछि कस्तो लाग्यो, सन्तुष्ट भयौ नि…. आदि इत्यादी सोध्ने गर्छन् । यो सरासर गलत हो । केटी मान्छे समाजमा दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ । उनीहरुको मनोविज्ञान लज्जालु छ । त्यसैले यस्तो प्रश्न केटीले मन पराउन्न । सेक्स भयो त भयो, त्यो कुरा घरिघरि के गर्नु लाग्छ उनीहरुलाई ।
त्यसैले सेक्स गरेपछि जीउ जोडेर एकछिन सुस्ताउनुस् । केही नबोल्नस् । हातले दूध चलाउनुस् । मुसार्नुस् । माया गर्नुस् तर केही नबोल्नुस् । अनि मायालुसँग एकछिन टाँस्सिएर सुत्नुस् । यी माथिका कुरा लगु गर्नुहोस तपाईको यौनजीवनमा ग्रहण लाग्न छैन ।
इन्धन र ग्यासको भाउ फेरि बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले फेरि इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको छ ।
सोमबार साँझबाट लागु हुने…
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण (अपडेट) :कँडेलको बयान जारी
चितवन । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका युवराज कँडेलको बयान शुरु भएको छ । अदालतले आज (सोमबार)…
BREAKING NEWS ठमेलमा ग्यासको सिलिण्डर पड्कियो
काठमाडौं । ठमेलको ज्याठामा एकाबिहानै ग्यासका सिलिण्डर पड्किएको छ । सिलिण्डर पड्किने क्रम जारी रहेकाले ठमेल क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति…
मुग्लिन आर्क ब्रिजको ९५ प्रतिशत काम सकियो
चितवन। जिल्लाकाे इच्छाकामना गाउँपालिकास्थित मुग्लिन र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको बेनीटार जोड्ने निर्माणाधीन मोटरेवल पुल ‘आर्क ब्रिज’ जेठबाट सञ्चालनमा आउने…
काठमाडौं । दिलनाथ गिरीमार्फत् कमल थापालाई भेटेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निकट भएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा…
वि.स.२०७५ साल वैशाख २६ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०१८ मे ०९ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।…